“Hadda ayuu ka qoomameynayaa” – Madaxweynaha Liverpool oo weeraray Philippe Coutinho – Gool FM
FIFA oo ku dhawaaqday natiijada codbixinta abaal-marinta xiddiga sanadka ee FIFA THE BEST… (Waa kuwee 10-ka ugu sarreeya?)
Muxuu sameynayey Cristiano Ronaldo markii uu Messi Magaalada Milan ku guddoomayay xalay abaal-marinta FIFA The Best?
Solari oo ku amaanay Klopp ku guuleysiga abaal-marinta macallinka sanadka ee FIFA THE BEST
Cristiano Ronaldo oo codkiisa u diiday Lionel Messi, saddexdii xiddig ee uu u codeeyey abaal-marinta FIFA The Best oo daaha laga rogay
Madaxweynaha Barcelona oo u hambalyeeyay Messi iyo De Jong, kaddib xafladii xalay abaal marinada FIFA ee The Best
Labada kabtan ee Ramos iyo Messi oo la ogaaday xiddigihii ay xalay u codeeyeen xafladdii abaal-marinada ee FIFA The Best
Arsenal, Tottenham iyo Man City – Ka bogo guud ahaan kulamada la ciyaarayo caawa ee tartanka Carabao Cup & Saacadaha ay soo galayaan
Hordhaca kulanka horyaalka Serie A ee Kooxaha Brescia iyo Juventus… (Mario Balotelli oo ku bilaaban kara kulankan)
Hordhaca kulanka horyaalka La Liga ee Kooxaha Barcelona iyo Villarreal… (Blaugrana oo doonaysa inay ka soo kabato guuldarradii Granada)
Waakee macalinka ku sugan Premier League ee magaciisa uu noqonayo Xaniinyo & fasiraada magacyada qaar ee xiddigaha waaweyn sida Kaka, Bale iyo xidigo kale?
“Hadda ayuu ka qoomameynayaa” – Madaxweynaha Liverpool oo weeraray Philippe Coutinho
Dajiye June 3, 2019
(England) 03 Juunyo 2019. Madaxweynaha Liverpool ee Tom Werner ayaan qarinin carada uu wali u qabo xiddiga reer Brazil ee Philippe Coutinho, kaasoo ku qasbay kooxda inay fasaxaan sanad iyo bar kahor, isagoo ugu biiray Barcelona qiimo dhan 120 milyan euro.
Tom Werner ayaa kaga faa’ideystay ka hadlida Philippe Coutinho kaddib markii ay Sabtidii ku guuleysteen tartanka Champions League, si uu u xasuusto waxa uu sameeyay Philippe Coutinho, isagoo sheegay inuu haatan ka shalaaynayo, kaddib markii uu ku fashilmay garoonka Cump Nou xili ciyaareedka dhawaan lasoo xiray.
Liverpool ayaa kaga cirib tirtay kooxda Barcelona wareega afar dhamaadka ee tartanka Champions League, kaddib markii ay ku garaaceen 4-0 kulankii lugta labaad, xili kulankii lugta hore Reds ay guuldaro 3-0 kala soo laabatay garoonka Cump Nou.
Hadaba wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa daabacay wareysi uu bixiyay Madaxweynaha Liverpool ee Tom Werner waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Coutinho wuxuu doonayay inuu u ciyaaro midkood labada kooxood waaweyn ee dalka Spain, waxaan isku dayeynay inaan ku qancino in kooxdu ay si sax ah u socoto, isla markaana aan heli karno habeen aad u weyn ee Champions League ah hadii uu sii joogo Liverpool, laakiin waxa uu go’aansaday inuu baxo, lagayaabee in xiligan uu ka qoomameynayo”.
Yeelkadeeda, Philippe Coutinho ayaa ku guuldareystay inuu hantiyo quluubta taageerayaasha kooxda Barcelona iyo saxaafada inta lagu jiray xilli ciyaareedka dhawaan soo idlaaday, kaddib markii uu soo bandhigay qaab ciyaareed xun oo ka dhigtay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu xun ee kooxda, hadii uusan ahayn kan ugu xun.
“Kuma laaban doono tababarka kooxda Barcelona” - Pep Guardiola
Halyeeyga Franz Beckenbauer oo amaan kala dul dhacay tababare Jurgen Klopp